Tsy Sina: Bhutan mandà ny fanambaran'i Doklam any Beijing
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia Bhutan » Tsy Sina: Bhutan mandà ny fanambaran'i Doklam any Beijing
Aogositra 10, 2017
Bhutan tamin'ny alakamisy dia nolaviny ny filazan'ny Minisiteran'ny raharaham-bahiny sinoa izay nolazain'i Thimphu fa ny faritry ny sisin-tany any Doklam any amin'ny faritra Sikkim dia tsy faritanin'i Bhutan, hoy ny Times of India.
Ny diplaomaty sinoa zokiny, Wang Wenli, dia nilaza fa nilaza fa nampita an'i Beijing tamin'ny alàlan'ny fantsona diplomatika i Bhutan fa tsy faritry ny faritra misy azy io.
Wang, ny tale jeneraly lefitry ny Departemantan'ny sisintany sy ny raharaham-bahiny ao amin'ny Minisiteran'ny raharaham-bahiny ao Shina, dia voalaza fa nampita izany vaovao izany tamin'ny delegasiona media Indiana tamin'ny Alarobia, hoy ny gazety.
Tsy nanome porofo izy hanohanana ny fitakiany, izay nolavin'i Bhutan mafy. Nilaza ny 29 Jona fa ny fanamboaran-dàlana ao anatin'ny faritanin'i Bhutanese dia fanitsakitsahana ny fifanarahana ary misy fiantraikany amin'ny fizotry ny famaritana ny sisin-tany eo amin'ny firenena roa tonta.
W Bellevue: W Hotel dia nanangana hotely fananganana voalohany voalohany tany Amerika Avaratra tao anatin'ny fito taona
WestJet: firaketana ny entana tamin'ny volana Jolay 85.6 isan-jato
29 minitra lasa izay